Ifektri eNye yokuLayisha iSelfowuni - Abavelisi beeSeli abaSetyenziselwa indawo enye, abaXhasi
Umzuzu oPhakamileyo / iZiko lokuLayisha
Hopper & Net Ukulinganisa
Jonga ubunzima kunye nokuzalisa oomatshini
Iplatifomu kunye neBelt Conveyor Scales
Izisombululo ze-OEM kunye neVAR
–Izinto ezingafakwanga i-inoxydable, i-laser etywiniweyo, i-IP68
-Ihambelana nemigaqo ye-OIML R60 ukuya kuthi ga kwi-1000d
-Ngokukodwa kusetyenziselwa abaqokeleli benkunkuma kunye nokufakwa kwetanki eludongeni
Inqaku elinye lokulayisha iSeli-SPG
Udidi oluchanekileyo lwe-C3
Ukulayishwa kwempahla kwiziko kuyahlawulwa
Ubukhulu. amandla ukusuka kwi-5 ukuya kwi-75 kg
Intambo yoqhagamshelo olukhuselweyo
Isatifikethi se-OIML siyafumaneka xa uceliwe
Isatifikethi sovavanyo siyafumaneka xa uceliwe
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPF
Indawo ephezulu yokulayisha iseli eyenzelwe ukwenziwa kwezikali zeqonga. Icala elikhulu elibekiweyo linokusetyenziselwa isitya kunye ne-hopper enobunzima besicelo kunye nokuphakamisa umgqomo kwezicelo ebaleni lezithuthi ezinobunzima. Yenziwe ngealuminiyam kwaye itywinwe ngokusingqongileyo ngokudityaniswa kombumbi ukuqinisekisa ukomelela.
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPE
Iiseli zomthwalo weqonga ziiseli zemithwalo yemithwalo enesikhokelo esikhokelayo ecaleni kunye neliso eligobileyo. Ngolwakhiwo lwe-welding laser ilungele ukusetyenziswa kushishino lweekhemikhali, ishishini lokutya kunye nemizi-mveliso efanayo.
Iselfowuni yomthwalo yi-laser-welding kwaye iyahlangabezana neemfuno zeklasi ye-IP66 yokukhusela.
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPD
Inqaku elinye lokulayisha iselfowuni lenziwe ngezinto ezikhethekileyo zealuminium alloy, ukutyabeka nge-anodized kuyenza imelane neemeko zokusingqongileyo.
Ingasetyenziselwa yodwa kwizicelo zesikali seqonga kwaye inentsebenzo ephezulu kunye namandla aphezulu.
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPC
Ifanelekile ukuba isetyenziswe kumzi mveliso weekhemikhali, ishishini lokutya kunye nemizi-mveliso efanayo.
Iselfowuni yomthwalo inika iziphumo ezichanekileyo zokuzala, ngaphezulu kwexesha elide nakwimeko enzima yoshishino.
Umthwalo weselfowuni uhlangabezana neemfuno zeklasi yokhuseleko IP66.
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPB
I-SPB ifumaneka kwi-5 kg ​​(10) lb ukuya kwi-100 kg (200 lb).
Sebenzisa kwizikali zebhentshi, ukubala isikali, jonga iinkqubo zokulinganisa, njalo njalo.
Zenziwe ngealuminium alloy.
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPA
Isisombululo se-hopper kunye nomgqomo obunzima ngenxa yamandla aphakamileyo kunye nobukhulu beqonga lendawo enkulu. Ischema esonyusayo yeseli yokulayisha ivumela ukubopha ngokuthe ngqo eludongeni okanye nakuphi na ukuma nkqo okuthe nkqo.
Inokuxhonywa ecaleni kwenqanawa, kugcinwa engqondweni ubungakanani besitya. Uluhlu olubanzi lomthamo lwenza ukuba iseli yomthwalo isebenziswe kuluhlu olubanzi lwezicelo zeshishini.
Ubunzima obuqinisekisiweyo, UkuLungiswa kweMisa, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital,